Ndise eCaweni nguHozier - Izinto Zobugcisa
Ndise eCaweni nguHozier
U-Andrew Hozier Byrne, owaziwa kakhulu njenge-Irish, u-Hozier, waqala ukudala ingxolo xa ethumela lo mzila ngo-Septemba ka-2013. Ingoma ifike kwi # 1 kwitshati ye-iTunes yase-Ireland eyodwa kunye # 2 kwitshathi esemthethweni yase-Ireland.
Ngokwesiqhelo le ngoma sisikweko esinye esikhulu xa kuthelekiswa umthandi nenkolo.
Ndiya kunqula okwenja, ebushushwini bakho
Ndiza kukuxelela izono zam kwaye ungalola imela yakho
Ndinike ukufa okungenakufa
Thixo olungileyo, mandikunike ubomi bam. '
Ukuthetha no Ixesha laseIreland U-Hozier uthe ngemicimbi yentliziyo: 'Ndifumene amava okuthandana okanye ukuthandana kukufa, ukufa kwayo yonke into. Uluhlobo lokuzibukela usweleka ngendlela engummangaliso, kwaye uva okomzuzwana nje - ukuba uzibona okomzuzwana ngamehlo abo - yonke into okholelwa ngayo ngawe ihambile. Ngengqiqo yokufa nokuzalwa ngokutsha. '
U-Hozier utsale ingqalelo ngakumbi ngokukhutshwa kwengoma ka-Brendan Canty yevidiyo yomculo, egxeka ingcinezelo yabantu abathandana nabathandana nabathandanayo eRussia. Ukukhula eIreland, icawe ihlala ikhona - uhanahaniso, ubugwala bezopolitiko, utshilo uHozier Ibhilibhodi kwiphephancwadi. 'Ividiyo inomxholo ofanayo-umbutho osingela phantsi ubuntu.'
Kubhalwe emva kokuhlukana nentombi yakhe yokuqala, le yingoma yothando kunye nokucamngca ngesono, ukutsala impembelelo kumbhali ongakholelwayo kubukho bukaThixo uChristopher Hitchens. UHozier wayichaza UMgcini njenge, 'ukulahleka kancinci ingoma yakho yenkolo.'
Umgca 'Ndazalwa ndigula, kodwa ndiyayithanda. Ndiyalele ukuba ndiphilise 'waphefumlelwa ngumbongo we-Elizabethan waseFulke Greville ka-1554 Abanye ababingeleli , lowo uthetha ngabantu 'badalwa begula, bayalelwa ukuba baphile.'
U-Hozier uchaze intsingiselo yengoma ku Sika : 'Ukwabelana ngesondo, kunye nokuzibandakanya kwezesondo- ngaphandle kokuziqhelanisa - yinto yendalo le,' utshilo. Isenzo sesondo sesinye sezona zinto zabantu. Kodwa umbutho ofana necawe, uthi, ngemfundiso yawo, uya kujongela phantsi ubuntu ngokufundisa ngempumelelo ihlazo malunga nokuziphatha ngokwesondo- ukuba kusisono, okanye kuyamcaphukisa uThixo. Ingoma imalunga nokuzimisela kwakho kunye nokubuyisa ubuntu bakho ngesenzo sothando.
U-Hozier wongeze ukuba le ngoma ayihlaseli ukholo. Ukuza kuvela eIreland, ngokucacileyo, kukho isuntswana lesinqe esixhonyiweyo kwimpembelelo yecawa. Unabantu abaninzi abahambahamba benobunzima obunzima ezintliziyweni zabo kwaye baphoxekile, kwaye oko kuyaqhubeka ukusuka kwisizukulwana ukuya kwisizukulwana, 'ucacisile. Ke le ngoma imalunga noku-kukungqina ngokwakho, ukubuyisa ubuntu bento ebaluleke kakhulu kwaye ibalulekile. Ukunyula, kule meko mfazi, ukukhetha uthando olufanelwe luthando. '
I-Hozier ivelise ubushushu bendawo emva kokwenza ingoma kwi NgoMgqibelo ebusuku . Nangona imvumi ikhulele eIreland, uxelele uGrantland ukuba ukudlala umdlalo kamabonakude waseMelika 'yinto enkulu, enkulu' kuye. Wachaza: 'Utata wandazisa kwi-Blues Brothers xa ndandisemncinci kakhulu. Kwaye NgoMgqibelo ebusuku - kulapho baqala khona. Ndiyazi kakuhle loo nto. '
Le ngoma ibonakaliswe kwi-2014 eyaziwayo Intengiso yee-headphones ezingenazingcingo ze-Beats . Indawo ibonisa i-NBA superstar LeBron James ebuyela kwidolophu yakowabo iAkron, eOhio kwaye ekhumbula iminyaka yakhe yobuntwana. UJames wayesandula ukubuyela kwiqela le-NBA lendawo, iCleveland Cavaliers, apho waqala khona umsebenzi wakhe wobuchwephesha. Izwi liyatsho, 'ungaze ulibale apho uvela khona' ngelixa le ngoma idlala ngasemva, igxininisa ukudibana okungahambelaniyo phakathi kukaJames kunye nesixeko.
Khalisa ezo ntsimbi: Le ngoma yeyona ngoma iphambili kwitshati ye-Hot 100 ngegama elithi 'icawe' kwisihloko sayo. Icawa yeNkcubeko 'yeCawa yengqondo yetyhefu,' eyafikelela kwi # 10 ngo-1983, yayiyeyona nto ibhetele ngaphambili.
Le yayiyeyona track ye-2014 isasazeke kwihlabathi liphela kwiSpotify. Ingoma yasasazwa ngaphezulu kwezigidi ezingama-87 amaxesha enyakeni kwinkonzo.
U-Hozier ukwenzile oku kwiiMbasa zeGrammy ngo-2015, apho watyunjelwa khona Ingoma yoNyaka (uSam Smith waphumelela ' Hlala nam '). Ukuphela kwengoma, wajoyinwa nguAnnie Lennox, owayecula naye ngaphambi kokuba angene kwingoma evuselelayo ethi 'Ndibeke Pela Kuwe.'
U-Hozier urekhode amazwi akhe kwigumbi lakhe eliphezulu ngentsimbi yesi-3 kusasa ngeyoMqungu ngo-2013.
U-Hozier uxelele ibali lengoma ukuba Q : 'Kudala ndisebenza kwiingoma,' utshilo. Ndihlala ndinemibono yeengoma iminyaka. Ndiye ndahlala phantsi kwipiyano ndaza ndenza into ethile ngesando ndaza ndafumana i-chorus kwaye loo magama avele endaweni yawo. '
Ingoma ibambe iitshathi kumazwe aliqela, kubandakanya i-Austria, iBelgium, iPortugal, iSweden neSwitzerland. Nangona kunjalo iwele nje kwimidlalo emininzi emide, ihamba phambili # 2 kwilizwe likaHozier e-Ireland, Canada, France, Germany, Netherlands, New Zealand, UK nase-US.
Ukucula kukaHozier ekuqaleni kwengoma:
Isithandwa sam sinoburharha
Uyayazi ukungamkelwa ngumntu wonke
Bekufanele ukuba ndimnqule kwangoko
Ebuzwa ngexesha le-Reddit AMA ukuba kuthetha ntoni ukuhlekisa emngcwabeni, uHozier uphendule wathi: 'Ukhe wayiqhekeza intsini yakho eCaweni? Ndicinga ukuba yinto eyenzekileyo kubo bonke abantu baseIreland ngaxa lithile. Inqaku elikhethekileyo, elimangalisayo ekubonakaliseni ukungabi nantlonelo ebusweni bento ekufuneka ihloniphekile. '
Cola nguLana Del Rey
Iingoma ezihlala zikho ngokwaneleyo ngeRocket to the Moon
Iingoma zeemvakalelo zabucala nguRicky Martin
Iingoma ezihamba ze nguJames Arthur
Lyrics for Ndijonge nguwe by Roxette
Iingoma zaLo ayililo igama lam nguTing Tings
IParadesi yeGangsta nguCoio
Iingoma ezikwi-Sunny Side yesitalato nguHarry Richman
Indlela eyiyo nguBruce Hornsby kunye noHlelo
Lyrics for Konke Kulunge by Taylor Swift
Isiporho sikaTom Joad nguBruce Springsteen
Iingoma ze-Unforgiven ngu-Metallica
Ndlovukazi lyrics we rock rock
ukuba ndiyinike konke ngenxa yento enye ngekhe ibe yinto lyrics
masiyenze masithandane no-cole porter
Inombolo yeengelosi ezingama-99 ezinentsingiselo
Ithetha ntoni i-222
yintsimbi yesithathu kufuneka ndinesithukuthezi lyrics